रेलमार्ग योजनादेखि सुरुङमार्ग र भूउपग्रहसम्मको विषय- संघीय संसद्‌मा आज बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली
संघीय संसद्‌मा आज बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रेलमार्ग योजनादेखि सुरुङमार्ग र भूउपग्रहसम्मको विषयलाई आफ्नो सम्बोधनमा समेटेका छन्।
पछिल्लो अवधिमा मैले केही अनौठो व्यवहारको अनुभूति गरेको छु। 'सरकार के गर्दैछ, पत्तो भएन'भन्ने प्रश्न उठाइयो। के गर्दैछ भन्ने जवाफ दिन्छु। अनि प्रतिप्रश्न आउँछ- प्रधानमन्त्री किन बोलेको? बोल्न नहुने रहेछ क्यारे भन्ने ठानेर चुप रहन्छु, प्रश्न उठान्छ- खै जवाफ दिएको? केही गर्न खोजिन्छ- सोधिन्छ, त्यो किन गरेको? केही नगर्दा त प्रश्न उठ्ने नै भयो- खै काम गरेको?
मलाई कुनै तर्क र बहसमा रुचि छैन। गर्नु पनि छैन, गर्नुछ त मुलुकको विकास। अब पनि यो देशको विकास नहुने हो भने कहिले र कसले गर्छ? त्यसैले आज यस सम्मानित सदनमा म उठेका वा उठाइएका रङ्गीबिरङ्गी प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि यस आर्थिक वर्षको नीति/कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनको स्थितिका बारे संक्षेपमा राख्ने अनुमति चाहन्छु।
विदेशमा होइन स्वदेशमै रोजगारीको चाहनालाई भरथेग गरिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनाको अवधिको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या ४१.२ प्रतिशतले घटेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या घटे पनि वित्तीय अनुशासनको प्रभावकारिताका कारण विप्रेषण आयमा भने ३६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म १७ हजार घर निर्माण भइ हस्तान्तरण गरिसकिएको छ। हाल ३८ हजार ८ सय ८० वटा घर निर्माणाधीन अवस्थामा छन्।
सन् २०१८ को १० महिनामै गत आर्थिक वर्षको पूरा अवधिकै हाराहारीमा पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। नेपाली पर्यटन व्यवसायीले गत महिना हवाईमार्ग हुँदै १० लाख पर्यटक नेपाल भित्रिएको उपलक्ष्यमा उत्सव नै मनाएका छन्। हवाईमार्गबाट मात्रै नेपाल भित्रिएका पछिल्लो दुई महिनाको पर्यटकहरूको सङ्ख्यालाई समेत जोड्दा १२ लाख नाघेको छ। यो सङ्ख्या गत सालको यही अवधिको तुलनामा २७ प्रतिशत बढी हो।
नेपाल र भारतबीच ऊर्जा ब्याङ्किङ सम्बन्धी निर्देशिकामा सहमति भएको छ। नेपाल सरकारको अनुरोधमा भारतले आफ्नो ऊर्जा आदानप्रदान निर्देशिकामा संशोधन गरेको छ। यसबाट नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली भारत र भारत हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म निर्यात गर्न बाटो खुलेको छ।
यस आर्थिक वर्षभित्र निर्माणाधीन विभिन्न परियोजना सम्पन्न हुने र नयाँ योजनाहरूको शिलान्यास हुँदैछन्। तीमध्ये यही माघभित्र झण्डै छ दर्जन परियोजना केहीको उद्घाटन र केहीको शिलान्यास हुँदैछन्।
मैले स्मरण गरिरहेको छु कुनै समय पानीजहाजको कुरा गर्दा कागजका डुङ्गा फ्याँकियो। रेलको चर्चा गर्दा रित्ता बाल्टिन् लाइनमा राखी कुरा काटियो। अहिले पनि सुनेको छु - जहाजको टिकट काटौँ भनेको, काउण्टर खै? हिजो नपत्याउनेहरू समेत आज, अब त हुन्छ क्यारे भन्ने तहमा पुगेमा म खुशी व्यक्त गर्दछु।
धैर्य गरौँ - रेल पनि आउँछ, जहाज पनि चल्छ। स्टेशन, टिकट काउण्टर सबै खुल्छ, ढुक्क रहे हुन्छ।
नेपाल पानीजहाज कार्यालय स्थापना र पानीजहाज रजिष्टार नियुक्त गर्ने प्रक्रिया शुरू गरिएको छ। नेपालमा जलमार्ग सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ।
अपराध नियन्त्रणको सन्दर्भमा हाम्रो प्रहरी प्रशासनले ९६ प्रतिशत सफलता हासिल गरेको छ । केही घटना अपवादका रूपमा रहेका छन् । त्यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सरकार सक्रिय छ। अपवादलाई आमको रुपमा प्रचार गर्ने र उल्लेख्य सफलतालाई ओझेल पारेर कृत्रिम परिस्थिति सिर्जना गर्ने अनुचित प्रयास देख्दा मलाई दुःख लागेको छ।
अन्यायमा परेका वा आपराधिक घटनाका शिकार भएका निर्मला वा अन्य छोरी चेलीहरूलाई न्याय सडकमा पोखिने अमर्यादित एवम् अराजक भिडले दिने होइन सरकारले दिन्छ। त्यसको नेतृत्व मैले गरिरहेको छु, ढुक्क रहे हुन्छ।
गत लामो समयदेखि नेपालमा भइरहेको सुनको तस्करी, त्यसमा जोडिएको आपराधिक मनोवृत्ति र संगठित अपराधको सञ्जाल ध्वस्त पार्ने कार्यमा राम्रो सफलता मिलेको छ।
विशेष अनुसन्धानको माध्यमबाट सुन तस्करीमा मुछिएका ७५ जना अभियुक्तमध्ये ४६ जना पक्राउ परेको, ३१ जना फरार रहेको र ३४ जनालाई अदालतबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ। ३६ जना अभियुक्तहरूको चल अचल सम्पत्ति रोक्का गरिएको छ।
चर्चित ३३ किलो सुनकाण्डका केही आरोपित व्यक्तिसहित भारतीय राजश्व अनुसन्धान ब्यूरोको सहयोगमा हालै कोलकतामा ३३ किलो सुन समातिएको छ। त्यसमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ।
प्रहरी तालिम केन्द्रसम्बन्धी निर्णय पनि आजको होन, धेरै अघिको हो। त्यतिखेर स्थान अभावको दावीसहित "मध्यशहरमा रहेको तालिम केन्द्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने" निर्णय गर्नेहरूबाटै अहिले अन्यथा टिप्पणी सुन्दा टिठ लाग्छ।